HALKAN KA AKHRISO DHAMAAN DASTUURKA CUSUB OO KA KOOBAN 16 CUTUB iyo 179 qodobo | Anti-Tribalism
← War deg deg ah; Madaxeynaha Sh Shariif oo durba qeylo dhaan kasoo saaray qaar kamid ah Qodobada Dastuurka qabyadda ah
Warbixin AMA Faalo: Maxaa (dhab ahaan) lagu haystaa Shariif Xasan? →
HALKAN KA AKHRISO DHAMAAN DASTUURKA CUSUB OO KA KOOBAN 16 CUTUB iyo 179 qodobo
CUTUBKA 1AAD – (BAAQA JAMHUURIYADDA)
Qodobka 1aad – Mabaadi’da Asaasiga
CUTUBKA 2AAD JINISIYADDA
Qodobka 9aad – Xuquuqda Gaarka ah ee Muwaaddiniinta
1. Qos kasta oo ku dhasha gudaha Soomaaliya, dhalasho ahaan waa Soomaali.
2. Muwaaddiniintu ayaga oo siman waxay leeyihiin:
a. Xuquuda, mudnaanta iyo faa’idooyin muwaaddinnimo; kuwaas oo Dastuurka ku xaddidan; iyo
b. Baasabboor Soomaali ah, dokumeenti diiwaangelineed iyo aqoon kasta oo ay dowladdu u soo saarto muwaaddiniinta.
3. Muwaadin kasta waxaa baasabboorka iyo dokumeentiga kale ee ku xusan faqradda (1) (b) loogu diidi karaa ama looga laali karaa ama looga qaadi karaa oo keliya sharci waafaqsan habraaca qodobka 43-aad.
Qodobka 10aad – Helidda iyo Haysadka Jinsiyadda
1. Jinsiyadda Soomaaliyeed waxaa lagu heli karaa dhalasho ama Soomaaliyeyn.
2. Qof jinsiyadda ku dhashay lagama qaadi karo jinsiyadda, xataa hadduu qaato jinsiyad dal kale.
3. Qof jinisiyadda ku dhashay ama la Soomaaliyeeyey iskii ayuu jinsiyadda Soomaaliyeed uga tanaasuli karaa.
4. Jinsiyadda laguma waayi karo guur ama furriin.
Qodobka 11aad – U-dhalashada Jinsiyadda
1. Qof kasta oo ku dhasha gudaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya, dhalasho ahaan waa Soomaali.
2. Qof kasta oo ku dhasha Soomaaliya dibaddeeda waa Soomaali dhalasho ahaan, haddii ay hooyadii ama aabbihii ku dhashay Soomaaliya ama isir ahaan Soomaali yihiin.
3. Qodobkani wuxuu si siman u saamaynayaa qof kasta oo dhashay taariikhda Dastuurka uu dhaqangalay ka hor ama kadib.
4. Ilmaha laga helo Soomaaliya oo ay da’diisu ka yar tahay siddeed-jir, oo jinsiyaddiisa ama tan waalidkiisa aan la aqoon, waxaa loo aqoonsanayaa inuu Soomaali yahay.
Qodobka 12aad – Muwaaddinnimada Lagu Helo Soomaaliyeynta
1. Qof kasta oo ay isqabeen ugu yaraan shan sano muwaaddin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbado Soomaaliyeyn.
2. Ilmo aan muwaaddin ahayn, balse qof muwaaddin ahi soo korsaday, xaq ayuu u leeyahay in la Soomaaliyeeyo. Waalidka korsanaya aa u dalbi kara ama markuu 18 jirsado ayuu laftirkiisu weydiisan karaa Soomaaliyeyn.
3. Qof Shan sano oo taxane ah, si sharci ah Soomaaliya u degganaa, buuxiyeyna shuruudaha sharciga jinsiyadda, xaq ayuu u leeyahay inuu dalbado Soomaaliyeyn.
4. Shardiga shanta sano ee uu qofku xaq u yeelanayo in lagu Soomaaliyeeyo guur ama degganaasho kuma xirna in uu buuxiyay ka hor ama ka dib taariikhda dhaqangalka Dastuurka.
Qodobka 13aad – Kala-noqoshada Soomaaliyeynta
1. Qof jinsiyadda Soomaaliyeyn ku helay waa lagala noqon karaa jinsiyadda haddii maxkamad awood sharciyeed u leh arrimahan ay ogaato in:
a. Uu jinsiyadda ku helay been-abuur, isu-ekeynsiin wax uusan ahayn ama qarin xaqiiqo sugan;
b. In iyada oo uu dalku dagaal ku jiro, uu si aan sharci ahayn ula ganacsado, la xiriiro, iskaashi hawleedna la yeesho cadawga oo ay caddaato inuu si ogaal ah ugu taakuleeyey dagaalkaas;
c. Soomaaliyeyntiisa ka dib lagu xukumo khiyaano qaran ama denbi kale oo lagu mutaysan karo ugu yaraan toddobo sano oo xarig ah.
2 Qofka loo haystey in jinsiyadda uu ku helay dhalasho sida ku xusan qodobka 11 (4), waa lagala noqon karaa jinsiyadda haddi maxkamad awood sharci leh ay go’aamiso:
a. In uu jinsiyadda ku helay been-abuur, isu-ekeynsiin wax uusan ahayn ama qarin xaqiiqo sugan;
b. In isaga ama waalidkii dhalay la ogaado inay jinsiyad kale leeyihiin; ama
c. In da’diisu ay ka weyneyd siddeed jir markii dalka gudihiisa laga helay.
Qodobka 14aad – Sharci u Dejinta Muwaaddinnimada
1. Baarlamaanka ayaa soo saari kara sharci habeeya:-
a. Soo-gelidda dalka iyo degganaashaha dadka shisheeyaha ah;
b. Degganeyaasha joogta ah;
c. Sida qof shisheeye ku heli karo jinsiyad Soomaaliyeed;
d. Qaabka khiyaar-uga-tanaasulidda jinsiyadda;
e. Habraaca jinsiyadda Soomaaliyeynta ku timid loola noqon karo; iyo
f. Qaabka ay u dhaqan-gelayaan qodobadda ku xusan Cutubkan.
(g) Mas’uuliyada ciqaabatu waa shakhsi; qofna looma ciqaabi karo fal-dembiyeed uu galay qof kale.
CUTUBKA 4AAD-WAAJIBAADKA JAMHUURIGA AH
Qodobka 47aad-Waajibaadka Muwaaddinka
(1) Shareecada Islaamku waxay ilaalinaysaa isu-dheelitirnaanta xuquuda iyo waajibaadka.
(2) Waajibaadka waddaniga ah sina loogama sooci karo ku-dhaqanka sinnaanta, xorriyaadka iyo xuquuqda kale. Sidaas darteed, muwaaddin kasta waxaa waajib ku ah :-
(b) In uu ka qayb-qaato hawlaha waxtarka u leh muwaaddinka, qoyska, wanaagga guud iyo in uu ka qayb qaato horumarinta qaranka iyo bulshada uu la nool yahay;
(e) In uu horumariyo mabda’a la xisaabtanka iyo talinta sharciga;
(g) In uu noqdo canshuur-bixiye wanaagsan, si uu uga qayb qaato kharajka Dawladda si waafaqsan awooddiisa waxbixineed iyo sharciga;
(h) In uu difaaco dhulka Jamhuuriyadda.
CUTUBKA 5AAD-DHUL, HANTI IYO DEEGAAN
(2) Dhulka waa in loo haystaa, loo adeegsada, loona maamulaa si caddaalad ah, waxtar leh, waxsoosaar joogto ahna leh;
(3) Dawladda Federaalku, iyadoo la tashanaysa dawlad-goboleeyada iyo ciddii kale oo ay khuseyso, waa in ay samaysaa siyaasad-dhuleed qaran iyo hannaan loogu talo-galay maamulka iyo ku-dhaqanka dhulka Jamhuuriyadda. Siyaasaddaas waa in lagu hirgeliyaa si waafaqsan awoodaha lagu qoondeeyay Jadwalka 2 waana in ay sugtaa diiwaangelinta, ku-dhaqanka, lahaanshaha, degmaysiga, xuquuqda maamulka, amniga, danaha gaarka ah iyo warqadaha sharciga lahaanshaha.
(4) Dawladdu uma bixin karto si abadi ah qayb ka mid ah dhulka, badda iyo hawada Soomaaliya.
(5) Baarlamaanku waa in uu soo saaraa sharci nidaaminaya kireynta iyo arrimaha kale ee la xiriira dhulka Dawladda, badda ama hawada. Si loo xaqiijiyo in heshiisyada arrimahaas la xiriiraa ay yihiin kuwo ay danta guudi ku jirto waa in:
(a) Marka ay tahay heer federaal, waa in xeer-dejinta federaalku ay oggolaansho ku soo saartaa xeer arrinkan xakamaynaya.
(b) Marka ay tahay heer dawlad-goboleed, xeer-dejinta maamul-goboleedku oggolaansho ku soo saartaa xeer arinkan xakamaynaya.
Qodobka 49aad-Isu-celinta Hantida
(1) Xukuumadda federaalka oo kaashanaysa Dawlad-goboleedyadu waa in ay u hawl-gashaa dib-u-soo-celinta hantida Dowladda oo si sharcidarro ah ay dad kale ku haystaan.
(2) Xukuumadda federaalku, ayada oo kaashanaysa xukuumadaha Dawlad-goboleedyada, waa in ay u guntataa dib-u-soo-celinta dhammaan hantidii dadka; ha ahaato dhul ama hanti kale oo si sharcidarro ah ay dad kale ku haystaan.
Qodobka 50aad-Khayraadka Dabiiciga iyo Deegaanka
(1) Khayraadka dabiiciga ah ee dalka sida macdanta, biyaha, dhirta, daaqa iyo ugaartu waa hanti dadweyne. Waa in uu baarlamaanku dejiyaa sharci tilmaamaya habka looga faa’ideysanayo khayraadkaas, si ay ku jirto danta guud.
(2) Xukuumada federaalku waxay mudnaan siinaysaa ilaalinta, kaydinta iyo dhawrista deegaanka, iyadoo laga ilaalinayo wax kasta oo wax u dhimaya kala-duwanaanshaha noole ee dabiiciga ah iyo qaab-dhismeedka deegaanka.
(3) Dhammaan dadka ku nool Jamhuuriyadda waxaa waajib ku ah ilaalinta iyo kobcinta degaanka Iyo ka-qaybgalka horumarinta, fulinta, maaraynta, xannaanaynta iyo dhawrista khayraadka dabiiciga ah iyo deegaanka.
(4) Xukuumadda Federaalka iyo xukuumadaha Dawlad-goboleedyada ee waxyeellada deegaanku ay saameeyeen waa in ay:
(a) Dhaqan-gelisaa tallaabooyin lagu nadiifinayo wasakhda iyo haraaga sunta halista ah ee lagu shubay dhulka iyo biyaha Jamhuuriyadda;
(b) Dejisaa sharci, qaaddaana tallaabooyinka lagama-maarmaanka ah ee looga hortegayo ku-daadinta wasakhdaas; taas oo ah xeer-jebin qaanuunka dawliga ah iyo ku-xadgudub gobannimada Jamhuuriyadda.
(c) Qaaddaa tallaabooyinka lagamamaarmaanka u ah in laga qaado magdhaw kuwa mas’uulka ka ah ku-aasidda wasakhada; ha joogeen Jamhuuriydda gudaheeda ama meel kale.
(d) Qaaddaa tallaabooyinka lagama-maarmaanka u ah dib-u-noolaynta, dib-u- dhiraynta, kor-u-qaadidda deegaanka iyo in laga hortago hawlaha wixii waxyeellayn kara khayraadka dabiiciga ah iyo deegaanka dalka.
CUTUBKA 6 AAD-MATALAADDA SHACABKA
Qodobka 51aad-Mabaadi’da Guud ee Matalaadda
(1) Nidaamaka doorashadu waa in uu ku dhisnaadaa mabaadi’da soo socota:
(a) Ku-dhaqanka xuquuqda siyaasadda ee muwaaddiniintu waxay ku caddahay qodobka 27aad.
(b) In geeddisocodka doorashadu noqoto mid sahlan, la fahmi karo xeerarkiisa, qaababkiisa iyo habraacyadiisaba.
(c) Dadka gaarey da’da codbixinta oo dhammi xaq siman ayay u leeyihiin in ay codkooda
(d) In dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliya ay helaan matalaad caaddil ah.
(e) In codadka cod-bixiyayashu ay sinaadaan intii suurto gal ah.
(f) In laga hortago iska-hor’imaadyada iyo kicinta colaadaha, iyo
(g) In doorashooyinku ahaadaan xor iyo caddaalad , kuna dhacaan:
i. codbixin qarsoodi ah;
ii. si ka xor ah rabshado, handdidaad, musuqmaasuq iyo laaluush;
iii. si furan, laguna maamulo eex la’aan, dhexdhexaadnimo, hufnaan iyo qaab laxisaabtan leh.
(2) Baarlamaanku waa in uu soo saaraa sharci nidaaminaayo qabashada doorashooyinka qaranka iyo Dawlad-goboleedyada. Sharcigaas inta suurtogal ah waa in uu xaqiijiyaa:-
(a) In doorasho kasta codbixiyeyaashu ay helaan macluumaad ku filan oo ku saabsan nidaamka doorashada, habraacyada iyo cidda ay dooranayaan;
(b) Muwaaddin kasta oo xaq u leh in uu codeeyo waa in uu isdiiwaan-geliyo, kaddibna codeeyo, is’hortaag iyo takoorid la’aan;
(c) Qof kasta oo codaynayaa in uu awood u leeyahay in uu codkiisa u dhiibto si waafaqsan damiirkiisa, iyadoo uusan jirin cadaadis uga imaanaya cid kale;
(d) Musharraxiinta iyo xisbiyada siyaasiga ah ee ku tartamaya doorashooyinku waa in ay helaan fursado siman oo caddaalad ku dhisan, xilliga u-ol’olaynta doorashada;
(e) In la xaddido saamaynta ay lacagtu ku yeelan karto natiijada doorashooyinka;
(f) Nidaamka codbixintu waa in uu ahaadaa mid sahlan oo hufan, la hubin karo, nabadgelyo leh, lala xisaabtami karo oo furfuran;
(g) In uu jiro nidaam iyo hab lagu xaqiijin karo xafidaadda agabka doorashooyinka, loogana hortegi karo maamulxumo; iyo
(h) In la diyaariyo qaab habboon oo lagu xalliyo murannada ka dhasha doorashooyinka.
Qodobka 52aad-Xisbiyada Siyaasiga Ah
(1) Xisbi siyaasadeed aan diiwaaan-gashanayni musharrax ma soo xuli karo.
(2) Baarlamaanku waa in uu soo saaro sharciga diiwaan-gelinta iyo diiwaan-ka-saaridda xisbiyada siyaasadda. Waa in la diiwaan-geliyo xisbigii buuxiya shuruudaha Dastuurkaan iyo halbeegayada kale ee lagu xusay sharciga.
(3) Waxaa reebban in la diiwaan-geliyo xisbi-siyaasadeed ku dhisan hayb-qabiil iyo ujeeddo ciidan.
(4) Habraaca diiwaanka looga saarayo xisbi-siyaasadeed jebiyey Dastuurka, sharciga ama xeerdhaqanku waa in uu xaqiijiyaa in ciqaabta xisbigu ay u dhiganto xadgubka dhaqankiisa iyo in habraacu noqdo mid cadaalad ah, kana madax bannaan Dawladda ama xisbi kale oo siyaasadeed iyo faragelinno kale oo aan loo baahnayn.
(5) Sharciga lagu dhaqayo xisbiyada siyaasaddu waa in uu waajib uga dhigaa xisbiyada in ay lahaadaan Dastuur iyo habraacyo ku dhisan dimoqraaddinnimo iyo takoorid la’aan ah, si caadi ahna xisaabaadkooda loo baari karo.
(6) Sharciga lagu dhaqayo xisbiyada siyaasaddu waa in uu waajib uga dhigaa xisbiyadaasi in ay caddeeyaan, ilaa iyo xad, taageerada maaliyadeed ee ay ka helaan ilaha qaarkood.
Qodobka 53aad-Xeer-dhaqanka Guud ee Xisbiyada Siyaasiga Ah
Guddiga doorashadu, isagoo la tashanaya hay’adaha iyo shakhsiyaadka ay khuseyso, waa inuu diyaariyaa xeer-dhaqanka guud ee xisbiyada siyaasadda.
Qodobka 54aad-Xeer-dhaqanka Waqtiyada Doorashada
Guddiga doorashadu, isagoo la tashanaya hay’adaha iyo shakhsiyaadka ay khuseyso, waa in uu diyaariyaa xeer-dhaqanka xisbiyada siyaasadda, musharraxiinta iyo warbaahinta, kaasoo nidaaminaya hab-dhaqanka xisbiyada siyaasadda xilliga ay ku jiraan ol’olaha qabashada doorashada, codaynta iyo wixii ka dambeeya.
CUTUBKA 8AAD-BARLAMAANKA FEDERAALKA
Qodobka 72aad-Dhismaha Baarlamaanka
Barlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ka koobnaan doonaa labo Aqal: Golaha Shacabka iyo Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyada.
Qodobka 73aad-Xilka Golaha Shacbiga
Xilka Golaha Shacbigu waa in uu matalo shacabka Soomaaliyeed, si ay uga qayb-qaataan xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka iyo dhammaan kharashyada xukuumadda, kormeeridda hawlaha dawladda iyo gudashada dhammaan xilalka kale ee uu Dastuurku u xilsaaro.
Qodobaka 74aad-Xilka Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyada
Aqalka wakiillada dawlad-goboleedyadu waxaa xil gaar ahi ka saran yahay matalaadda dawlad-goboleedyada Soomaaliya iyo ilaalinta nidaamka federaalka. Waxay ka qayb- galaan xeerdejinta iyo oggolaanshaha miisaaniyadda qaranka. Sidoo kale, waxa ay ka qayb-galaan kormeerka hawlaha xukuumadda iyo hawlaha kale ee uu u xilsaaro Dastuurku.
Qodobka 75aad-Xubinnimada Golaha Shacbiga
(1) Tirada xubnaha Golaha Shacbiga waxa ay noqonaysaa 200 ilaa 300 oo ay soo dooranayaan dadweynuhu iyagoo raaacaya sharciyada loo meelmariyay si waafaqsan qodobka 52(2) .
(2) Taariikhda doorashooyinka Golaha Shacbiga waa in ay gooyaan Guddiga Doorashadu kaddib markuu la tashado Madaxweynaha Jamhuuriyada iyo Afhayeenka Golaha Shacbiga, waana in lagu qabtaa inta aysan dhammaan lixdanka casho ee ugu dambeeya jiritaanka Golaha Shacbiga.
Qodobka 76aad-Xubinnimada Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyada
Xubnaha Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyadu waxa uu ka koobmaa ergo 10 xubnood ah oo ka kala imaanaysa dawlad-goboleed kasta. Xubin ka mid ah ergadu waxay noqonaysaa madaxa Xukuumadda dawlad-goboleedda ama qof isaga matalaya, 9ka xubnood ee kalena waxaa soo magacaabaya baarlamaanka dawlad-goboleedda oo ka soo xulaya xubno ka baxsan baarlamaanka dawlad-goboleedda.
Qodobka 77aad-Ka-mid-noqoshada iyo Waayidda Xubinnimada
(1) Qofna xubin kama noqon karo labada Aqal ee baarlamanka haddii aan loo diiwaangelin in uu yahay cod-bixiye Soomaali ah oo ay da’diisuna ka weyn tahay 25 sano.
(2) Qofna xubin kama noqon karo labada Aqal ee baarlamanka haddii:
1.(a) Si sharciga waafaqsan loo caddeeyey dhimirkiisu inuusan dhammayn;
2.(b) Si sharciga waafaqsan loo caddeeyey in uu musallif yahay;
3.(c) Lagu helo dembi la xiriira doorashooyinka 10kii sano ee ugu dambaysey gudaheeda;
4.(d) Lagu helo dembi ku lug leh musuqmaasuq iyo ku-tagrifalid awood xafiis ciqaabteedu ay ka badan tahay 5 sano, Kaddib marka la dhaqan-geliyo Dastuurkan; ama
5.(e) Xabsi uu ku jiro.
Qodobka 78aad-Muddada Xilka Xubnaha Baarlamaanka
(1) Haddii aysan dhicin xaaladaha lagu xusay faqrada (2), qofka xubin ka ah Golaha Shacbigu waxa uu xilka haynayaa ilaa laga dhaariyo xubnaha baarlamaan cusub, kaddib doorashada guud ee xigta.
(2) Marka laga tago faqrada (1), xubintu waxa ay xubinnimadeeda ku waayi kartaa haddii uu:
1.a) Istiqaalo keeno;
2.b) Xubinnimada ku waayo sida ku xusan qodobka kore; ama
3.c) Loo doorto ama loo magacaabo xafiis hawshiisu aanay la socon karin xubinnimada baarlamaanka.
(3) Qofka Xubin ka ah Aqalka wakiillada dawlad-goboleedyadu wuxuu xilka ku waayayaa marka:
1.a) uu ku waayo xubinimadiisa sida uu qabo aodobka 77.
2.b) xilka looga qaado si waafaqsan Dastuurka Dawlad-Goboleedda; ama
3.c) uu istiqaalo keeno.
Qodobka 79aad-Xilka Xubnaha
(1) Xubin kasta oo ka mid ah labada Aqala ee baarlamankau markuu xilkiisa gudanayo waa in uu ku shaqeeyaa si ay danta qaranku ku jirto.
(2) Xubin kasta oo ka mid ah Golaha Shacbiga oo matasha degaan/codbixiyeyaal waxa masuuliyad gaar ahi ka saaran tahay matalaadda codbixiyayaasheeda, iyada oo aan loo eegaynin xiriirkooda siyaasadeed.
(3) Xubin kasta oo ka mid ah Aqalka wakiillada dawlad-goboleedyadu waxa uu xil gaar ahi ka saaran yahay matalaadda danaha dawlad-goboleedda uu matalayo iyo in uu ilaaliyo nidaamka federaalka, kuna shaqeeyo dareen iskaashi federaalnimo.
Qodobka 80aad-Afhayeenka iyo Ku-xigeenka Aqal Kasta
(1) Doorashada guud kaddib waa in Aqal kastaa fadhigiisa koowaad ka dhex-doorto xubinhiisa Afhayeenka iyo ku-xigeennadiisa. Fadhiga waxaa shir-gudoominaya xubinta Aqalka ugu da’da weyn.
(2) Haddii ay dhacdo waqtiyada qaar in ay maqanaadaan Afhayeenka iyo ku-xigeennadiisu, Aqalku waa in uu u doortaa mid ka mid ah xubnihiisu in uu noqodo shir-gudoomiye ku- meel-gaar ah.
(3) Afhayeenku waa in uusan qaban ama uu ka tanaasulo xil kasta oo uu ka hayo xisbi siyaasadeed, waana in uu noqdo dhexdhexaad marka uu gudanayo/gudaneyso xilalkiisa/xilalkeeda.
(4) Afhayeenka iyo ku-xigeennadiisa waxaa xilka looga qaadi karaa codbidxinta saddex dalool laba dalool xubnaha baarlamaanka.
(1) Muddada xilka Golaha Shacbigu waa 5 sano laga bilaabo fadhiga koowaad ee doorashada ka dib, haddii aan Aqalka lagu kala dirin sida uu qabo Qodobka 82.
(2) Aqalka wakiillada dawlad-goboleedyadu waa Gole Joogto ah.
(1) Golaha Shacabka ee cusub, lana soo doortay waa in uu qabsadaa fadhigiisa koowaad 30 maalmood gudahood, kaddib marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada guud. Taariikhda fadhiga la qabanayo waxaa gooynaya guddiga doorashada.
(2) Baarlamaanku waa in sanad kasta uu yeeshaa labo kalfadhi oo ka bilaabanya bilaha Abriil iyo Oktoobar, waana in uu kalfadhi kasta fariistaa ugu yaraan tiro go’an oo maalmo ah.
(3) Go’aan baarlamaan ayaa lagu xaddidayaa, waqtiyada iyo taariikhaha kalfadhiyada Aqal kasta.
(4) Marka kalfadhiyada Aqalka la soo gebagabeeyo, kalfadhi aan caadi ahayn waxaa isugu yeeri kara Madaxweynaha (nidaamaka baarlamaaniga isaga oo fulinaya codsiga Golaha Wasiirada) ama Afhayeenka. Kalfadhi aan caadi ahayn waxaa la isugu yeeri karaa marka ay codsi qoraal ah ku weyddiistaan 20% xubnah Golaha Shacbigu ama kalabbar oo bar ergooyinka dawlad-goboleedyada ee Aqalka wakiillada dawlad-goboleedyada kalfadhiyadiisa.
Qodobka 83aad-Kala-dirista Gololaha Shacbiga
Lama kala diri karo Golaha Shacbiga ka hor dhammaadka muddadiisa shanta sano ah marka laga reebo (nidaamaka baarlamaaniga) haddii uu awoodi waayo in uu ansixiyo golaha wasiirada iyo barnaamijka dowlada sida ku xusan Qodobka 106(3).
(1) Aqal kastaa waa in uu samaystaa xeer-hoosaadkiisa, kaas oo siinaya ka-qaybgal buuxa xubnihiisa iyo dadweynaha.
(2) Fadhiyada labada Aqal iyo guddiyadooduba waa inay u furan yihiin dhegeysiga dadweynaha iyada oo maanka lagu hayo mabaadi’da guud ee furfurnaanta dawladda, haddii aanu Afhayeenku amrin sidaas si ka duwan.
Qodobka 85aad-Tirada Shirarku Ku Qabsoomayaan (Quorum)
(1) Qabsoomidda kalfadhiyada baarlamaanka waxa looga baahan yahay ka-soo-qaybgalka saddex dalool laba dalool xubnaha labada Aqal.
(2) Golaha Shacbigu wuxuu qabsan karaa hawshiisa keliya marka ay joogaan saddex dalool hal dalool xubnihiisu.
(3) Aqalka Wakiillada dawlad-goboleeddu wuxuu qabsan karaa hawlihiisa keliya marka ay joogaan ugu yaraan min hal qof oo ka socda saddex dalool hal dalool dawladgoboleed kasta isla markaana ay joogaan ugu yaraan saddex dalool hal dalool xubnaha Aqalku.
(4) Golaha Shacbigu wuxuu sharci u codayn karaa marka ay joogaan kalabbar oo bar xubnihiisu.
(5) Aqalka Wakiilladu wuxuu sharci u codayn karaa keliya marka ugu yaraan uu ka joogo min hal qof oo ka socda saddex dalool hal dalool dawladgoboleed kasta isla markaana ay joogaan ugu yaraan kala bar xubnaha Aqalku.
(1) Haddii Dastuurku uusan u tilmaamin si kale, go’aan kasta ee Golaha Shacbiga ka soo baxaa wuxuu ku ansaxayaa codka aqlabiyadda xubnaha jooga ee codeeyey.
(2) Haddii aan si kale Dastuurku sheegin, ergada ka socota dawlad-goboleed kastaa waxay wadar ahaan u leedahay hal cod marka go’aan lagu gaarayo Golaha Wakiillada dawlad-goboleedyada.
Qodobka 87aad-Habraaca Sharci-dejinta Baarlamaanka
(1) Hindise sharciyeed oo saamaynaya dhammaan ama qayb ka mid ah dawlad- goboleedyada ama nidaamka Dawladda federaalka waxaa la hor-geyn karaa ku’ kasta oo ka mid ah labada Aqal.
(2) Hindise sharci oo kasto waa in la hor-geeyaa Golaha Shacbiga.
(3) Xukuumadda, ugu yaraan 10 xubnood oo ka mid ah Golaha Shacabka ama ugu yaraan 10.000 oo codbixiyeyaal ah ayaa Golaha Shacbiga waxay soo hor-dhigi karaan qabyoqoraal sharci.
(4) Xukuumadda ama ergada dawlalad-goboleeddu waxay soo hordhigi karaan Aqalka Wakiillada hindise sharci.
(5) Hindise kasta ee sharci oo u baahan kharash guud ama saamaynaya canshuuraha waxaa baarlamaanka soo hor-higi kara xukuumadda oo keliya.
(6) Hindise kasta ee sharci waa in la hor-geeyo labada Aqal ee baarlamaanka.
(7) Hindise sharci oo saamaynaya dhammaan ama qaar ka mid ah dawlad-goboleedyada ama nidaamka xukuumadda federaalka, waa in ay ansixiyaan labada Aqal si uu sharci u noqdo. Kaddib marka uu ansixiyo golaha la hor-keenay waa in sharcigan loo gudbiyaa Aqalka kale.
(8) Xeer-hoosaadka labada Aqal waa in uu oggolaadaa dhismaha guddi dhexdhexadin oo isuk daya in laga gaaro wadar oggol sharci ay labada Aqal isku khilaafeen.
(9) Hindise sharci oo aan saamaynayn dhammaan ama qayb ka mid ah dawlad- goboleedyada ama nidaamka Dawladda federaalka marka uu ansixiyey Golaha Shacbiga waa in loo diraa Aqalka wakiillada. Haddii Aqalkaasu uu ansixin waayo ama uu ansixiyo kaddib marka uu ku sameeyo isbeddello, labada Aqalna ay ka gaari waayaan heshiis, Aqalka Dadweynuhu waa in uu go’aansadaa in uu u gudbiyo Madaxweynaha qabyoqoraalka sharci, isaga oo ah qaabkii uu ku ansixiyey baarlamaanku ama in uu dhinac iska dhigo si mustaqabalka looga doodo ama laga wada tagao qabyoqoraalkaa.
Qodobka 88aad-Oggolaanshaha Sharci iyo Suurtagalnimada Dib-ugu-celintiisa Baarlamaanka ama Maxkamadda Dastuurka
(1) Hindise sharci wuxuu sharci noqonayaa kaddib marka uu ansixiyo Barlamanku, madaxwenuhuna uu saxiixo, isla markaana lagu soo saaro faafinta rasmiga ah.
(2) (Nidaamka baarlamaaniga ah isaga oo fulinaya codsiga xukuumada), Madaxweynuhu wuxuu dib ugu celin karaa baarlamaanka hindise sharci oo aan loo marin habraac sax ah. Haddii baarlamanku ku celiyo Madaxweynaha hindisaha sharci isaga oo aan wax ka beddelin ama uu mar labaad ansaxiyo, Madaxweynuhu waa in uu aqbalaa.
(3) (Nidaamka baarlamaaniga ah isaga oo fulinaya codsiga Rai’iisul-wasaaraha), Madaxweynuhu wuxu weyddiisan karaa baarlamaanka in uu dib u eego Hindise sharci oo uu ansixiyey, iyada oo sabab looga dhigayo sharcigaas nuxurkiisu in aanu habboonayn. Waa in uu saxiixaa Madxweynuhu, haddii baarlamaanku mar labaad ku ansixiyo hindise sharci saddex dalool labo dalool aqlabiyadda labada Aqal, kuna soo celiyaan Madxweynaha, si uu u saxiixo.
(4) Madxweynaha, 10 xubnood oo ka mid ah Golaha Shacabka, mid ama ka badan ergada xubnaha Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyada ama Golaha Wasiirrada ayaa hor-geyn kara Maxkamadda Dastuuriga hindise sharci oo uu baarlamaanku ansixiyey, si ay go’aan uga gaarto Dastuuninimada nuxurka hindisaha sharci ama habraaca loo maray oggolaanshihiisa.
(5) Madaxweynuhu haddu diido in uu saxiixo ama saxiixi waayo hindise sharci oo uu ansixiyey baarlamaanku, isaga oo aan u haysan wax sharci ah, qabyo-qoraalka sharci wuxuu noqnayaa sharci shan iyo toban beri kaddib taariikhda Madaxweynaha loo gudbiyey.
(1) Golaha Shacabku waa in uu dhisaa guddiyo diyaariya xeerar, kormeera hawlaha xukuumadda, hubiyana miisaaniyadda iyo xisaabaadka xukuumadda iyo hay’adaha kale; kuwaas oo uu xisaabtooda baaro Hanti-dhawraha Guudi.
(2) Guddiyada la dhisay waa in ay ku jiraan guddiyada waaxyaha joogtada ah, si ay u baaraan hawsha hay’adaha kala duwan ee xukuumadda sida lagu muujiyey qaybinta awoodaha ee wasiirrada. Mid kasta oo oo ka mid ah guddiyadaasi waa in uu qaadaa masuuliyada baaritaanka mid ama ka badan qaybahaas.
(3) Aqalka Wakiillada dawlad-goboleedyadu waa in uu dhisaa guddiyo fududeeya hawlihiisa.
(4) Labada Aqal waxa ay dhisan karaan guddiyo wadaag ah.
(5) Baarlamaanku wuxuu ansixin karaa sharci u oggolaanaya guddoomiyeyaasha guddiyada in shaqadooda lagu siiyo gunno macquul ah.
Qodobka 90aad-Ka-qaybgalka Wasiirrada ee Fadhiyada Baarlamaanka
(1) Wasiirradu waxay ka soo qayb-geli karaan fadhiyada baarlamaanka, kana hadli karaan, ayaga oo aan cod ku lahayn. Xeer-hoosaadka Golaha Shacbigu wuxuu oggolaan karaa in kalfadhiyada caadiga ah ay wasiirradu, qoraal ama tiraab, kaga jawaabaan su’aalaha xubnaha. Wasiirradu waa in ay ku dedaalaan niyad iskaashi inay kalfadhiyada uga soo qayb-galaan.
(2) Wasiirrada waxaa u yeeri kara labada Aqal ama Guddi Joogto ah oo Golaha Shacbiga ka tirsan sida qodobka soo socdaa uu dhigayo.
Qodobka 91aad-Awoodaha Ku-qasbidda Ka-soo-qaybgalka Fadhiyada
Qodobka 92aad-Xorriyadda Hadalka iyo Xasaanadda Mudanayaasha Baarlamanka
Xubnaha baarlamaanka lama dacweyn karo, lagumana eedayn karo hadal ay ka yiraahdeen baarlamaanka dhexdiisa. Xubin ka mid ah baarlamanka oo ku sugan xayndaabka aqalka baarlamaanka, laguma fulin karo amar xarig ama baaris. Xubin baarlamaanka ka mid ah lama xiri karo, lagumana eedayn karo fal-dembiyeed haddii Xeer-Ilaaliyaha Guud uusan ogolaannin.
Qodobka 93aad-Hoggaamiyaha Mucaaradka
(1) Madaxweynuhu waa in uu Hoggaamiyaha Mucaaradka u magacaabaa qofka ay u doorteen xubnaha Golaha Shacbiga ee aan ka tirsanayn xisbiga xukuumadda, isbahaysina aan kula jirin.
(2) Xafiiska Hogaamiyaha Mucaaradka waa in la siiyo dhaqaale ku filan, oo ay ku jiraan hawl-wadeenno, si awood loogu siiyo mucaaradku in ay hawlahooda gutaan.
FIIRO: Gudigu wuxuu go’aamiyay in la diyaariyo qodobo ku saabasan nidaamka baarlamentaariga iyo midka madaxtooyada oo ay la socdaan hay’ada fulinta ee midkasta oo labada nidaam ka mid ahi yeelanayo. Nidaamka baarlamentaariga ee hay’ada fulinta ayaa soo horreeya kan madaxtooyaduna waa ku xigaa. Go’aanka kama dambaysta ah waxaa lagu salaynayaa aragtiyada laga soo gudbiyo la-tashiga dadweynaha ee qabyo-qoraalka dastuurka.
CUTUBKA 9AAD-LAANTA FULINTA EE FEDERAALKA
Xulashada 2aad: Nidaamka Madaxtooyada
Qodobka 94aad-Madaxweynaha Jamhuuriyadda
Qodobka 95aad-Shuruudaha Madaxweynaha
Waxaa loo dooran karaa xilka madaxweynaha muwaaddinkasta oo soomaaliyeed oo ay da’diisu gaareyso 40 sano, lehna sumacad sare, waayo aragnimo iyo heer aqoon oo ku haboon hogaaminta xushmada qaranka.
Qodobka 96aad-Doorashada Madaxweynaha iyo Madxweyne Ku- Xigeenka
(1) Madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa si toos ah u doran doono dadweynaha.
(2) Qofka hela tirada codadka ugu badan ee doorashada ayaa noqonayo Madaxweyne waa haddii uu qofkaasi helo in kabadan 50% codadkii la tirayay oo anasax ah , ama uu helo in kabadan 40% codadka cod-bixiyeyaalka iyo ugu yaraan 25% codadka saddex dalool labo dalool ee dowlad-goboleed kasta. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
(3) Doorashada Maddaxweynaha iyo madaxweyne ku-Xigeenka iyo tan Golaha Shacbiga waa in la qabtaa isku maalin hadeysan lagama maarmaan noqon doorasho gaar ah sida ku xusan qodobka103(4).
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa
(1) Musharraxa Madaxweynenimada ama ku-Xigeenka Madaxweynaha waxaa soo jeedin karaa xisbiyada siyaasadeed ama wuxuu noqon karaa Musharrax madax-bannaan.
(2) Qofka isu taagaya musharraxnimo madax-banaan waa in uusan haynin xafiis xisbi siyaasadeed mudadii shanta sano oo la soo dhaafay.
(3) Qofka noqonaya musharraxa madaxa-bannaan waa in uu ka heystaa ugu yaraan kala bar oo bar dowlad-goboleeddada taageerayaal ugu yaraan gaaraya 500 oo ka mida cod-bixiyeyaalka diiwaangashan. Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta.
Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha
(1) Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
(2) Hindisaha sharciga lagu maxkamadeynayo madaxweynaha waxaa soo jeedin kara ugu yaraan saddex dalool hal dalool mudanayaasha Golaha Shacbiga. Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada.
(3) Haddii hindisaha sharci ay ansixiyaan saddex dalool labo dalool xubnaha Aqalka Wakiilada dowlad- goboleeddadu ayaga oo u codeynaya qof qof oo aan u codeyneynin koox goboleed maxkamadeynta Madaxweynaha waa in la socodsiiyaa.
(4) Codbixinta labada Aqal waxay u dhaceysa si qarsoodi ah.
(5) Maxkamada dastuuriga ayaa qaadeysa dacwada xilkaqaadista Madaxweynaha.
(6) Madaxweynuhu waa in uu iscasilaa haddii maxkamada dastuurigu ku hesho in uu jebiyay dastuurka galayna dambiyada kale ee lagu soo eedeeyay.
(7) Haddii hindise sharciyeedka maxkamadeynta madaxweynaha lagu ansaxiyo aqalabiyadda lagama maarmaanka ah ee labada Aqal, madaxweynaha waxaa laga joojinayaa howshiisa ilaa ay ay dhamayso dhegaysiga dacwadiisa maxkamada dastuuriga ahi. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
(8) Waa in la soo saaraa sharci ay ogolaadeen saddex dalool labo dalool xubnaha labada Aqal oo lagu qeexayo habraac caddaalad ah oo xilka looga qaadayo madaxweynaha marka uu awoodi waayo in uu guto xilka xafiiskiisa sababo caafimaad darro jireed iyo maskaxeed darteed.
(9) Madaxweyne-ku-xigeenka waxaa lagu maxkamadeyn karaa isla sababaha iyo habraaca madaxweynaha lagu maxkamadeyn karo.
Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Qodobka 100aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka
Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Qodobka 101aad-Awooda Madaxweynaha
Awoodaha madaxweynaha waa:
(1) Magacaabista iyo kala diridda wasiirada Dowladda Federaalka;
(2) Waa taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida;
(3) Inuu ogolaado ama dib u celiyo sharciga uu ansixiyay baarlamaanka ama in uu u diro maxkamada dastuuriga sida ku xusan qodobka 88.
(4) Magacaabista danjirayaasha iyo ergooyinka diblomaasiga ah;
(5) Ku-dhawaaqidda xaalad dagal ama nabadgalyo marka ay ogolaadaan labada gole ee baarlamaanka;
(6) Ku-dhawaaqida xaalad deg deg ah sida ku xusan qodobka 169(3).
(7) Bixinta biladaha iyo aqoonsiyada mudnaanta ee kale;
(8) In uu cafiyo, ciqaabtana ka dhimo dembiilayaasha xukuman marka uu ka talo-qaato gudiga talo-bixinta eee madaxa bannaana iyo
(9) In uu qabto hawlaha kale ee loogu xilsaaray dastuurkan ama sharci kale ee waafaqsan dastuurkan iyo qiyamkiisa.
Qodobka 102aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka
(1) Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa. Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka 103.
(2) Qofka ah sii-hayaha xilka Madaxweynaha malaha awoodda maagacaabista iyo kala dirista wasiirada, magacaabista garsoorayalka iyo dib ugu celinta baarlamaanka sharci ay ansixiyeen, haddii uusan Madaxweynuhu si qoraal ah ugu wakiilanin in uu sidaa fuliyo ama uusan Madaxweynuhu noqonin mid aan awoodin in uu guto howsha xafiiskiisa muddo ka badan saddex bilood.
Qodobka 103aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha
(1) Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
(2) Madaxweyne-ku-xigeenku wuxuu xilka sii haynayaa inta ka harsan mudada xilka madaxweynaha.
(3) Haddii Madaxweyne ku-xigeenka waqtiga loo dhaariyay madaxweynenimada ilaa dhamaadka muddaada xilka madaxweynennimadu ay ka badantahay labo sano iyo bar, mudadii uu hayay xilka madaxweynenimada waxaa loo xisaabinayaa in ay tahay muddo xileed dhameystiran. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka 100 (ee muddo xileedka Madaxweynaha).
(4) Haddii madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado afhayeenka baarlamaankuna uu la wareego xilka waa in la qabtaa doorashooyin 90 maalmood gudahood si loo dhamaystiro inta ka hartay muddo xileedka madaxweynaha.
(5) Haddii muddo-xileedka Madaxweynaha ay ka harsan tahay muddo aan ka badnayn 18 bilood waa in aan la qaban doorasho waxaana xilka madaxweynenimada sii haynaya Afhayeenka Golaha Shacbiga inta ay ka dhammaanayso muddo-xileedka xaafisku.
Qodobka 104aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha
Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga.
Qodobka 105aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka
Qodobka 106aad-Dhaarta Madaxweynaha
Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaan , waxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga.
Qodobka 107aad-Golaha Wasiirada
(1) Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska
(2) Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
(3) Golaha Wasiirrada cusub wadar ahaan waxaa u ansixinaya Golaha shacabka ama qof qof ayuu u ansixinayaa Goluhu xubnaha gadaal laga magacaabay ee Golaha Wasiirrada.
(4) Xilka ka qaadista wasiirada waxaa awood u leh Madaxweynaha oo kaliya.
Qodobka 108aad-Dhaarta Wasiirada
FIIRO: Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan.
Qodobka 113aad-Awoodda Garsoorka Jamhuuriyada
Qodobka 114aad-Madaxbannaanida Garsoorka
Qodobka 115aad-Habka Dacwad Qaadista
(2) Go’aan maxkamadeed lama gaari karo hadii aan la siinin dhinacyada fursado isku mid ah oo ayku soo bandhigaan doodahooda
Qodobka 116aad-Nidaamka Maxkamadaha Dalka
Waxaa jiraya hal nidaam maxkamadeed oo ka kooban:
Qodobka 117aad-Dhismaha Maxkamadda Dastuuka
(3) Magacaabista garsoorayaasha Maxkamada Dastuurka waa in lagu saleeyaa xeel dheeri
aqooneed ee shareecada iyo qaanuunka waana in ay takhasus gaar ah u leeyihiin arrimaha Dastuurka.
(b) In ay go’aan kama dambays ah ka gaarto in sharci ama go’aanno ay gaareen Golaha
(c) Maxkamada waxay awood u leedahay in ay go’aamiso in burinta sharcigaas uu
(d) Awoodda kama dambaysta ee go’aan looga gaaraayo muranada ka dhaxeeya dowladgoboleedyada
(e) Awoodda kama dambaysta ee lagu ansixinayo natiijooyinka aftida iyo doorashooyinka
(5) Go’aannada ay gaarto Maxkamadda Dastuuriga ee la xiriira arrimo Dastuur waa kuwa kamaa
Qodobka 118aad-Dacwad Gudbin
(1) Dacwad-u-gudbinta Maxkamada Dastuurka waxaa leh:
(b) [Nidaamka Baarlamaaniga ah] Ra’iisuul-Wasaaraha;
(d) 25 xubnood oo ka tirsan labada Aqal midkood;
(e) Xukuumadda Dowlad Goboleedda;
(f) Guddiyada Madaxa-bannaan;
(g) Qof kasta oo uu saameeyo sharci ama tallaabo ka soo horjeedda Dastuurka.
(2) Dhinacyada kor ku xusan oo aysan ku jirin shakhsiyaadka caadiga ahi waxay talo ku saabsan arrimo dastuur weyddiisan karaan Maxkamadda Dastuuriga .
Qodobka 119aad-Dacwad- u-gudbinta Maxkamadaha Kale
Maxkamadaha kale ee dalku waxay weydiisan karaan Maxkamada Dastuuriga talo ama fasiraad ku saabsan Dastuurka marka si ay go’aan uga gaaraan dacwado maxkamadahooda horyaal. Maxkamaddu waa in ay sidaas yeesha hadii qof qayb ka ah kiiska maxkamada horyaal uu codsado, maxkamadduna ay ku qanacdo in go’aan-ka- gaaridda arrimaha dastuurigaa ay udub dhexeed u tahay go’aan-ka- gaaridda kiiskan .
Qodobka 120-Maxkamadda Sare
(1) Waxaa la dhisayaa maxkamad sare oo ka kooban sagaal garsoore oo uu ku jiro Gudoomiyaha.
(2) Guddoomiyaha maxkamadda sare waxa iska dhex-dooranaya xubnaha garsoorayaasha
(3) Xubnaha garsoorayaasha maxkamadda sare waa in ay aqoon sare iyo xeeldheeri u leeyihiin shareecada iyo qaanuunka.
(4) Maxkamadda sare waxay awood u leedahay dhammaan dacwooyinka marka laga reebo kuwa la xiriira arrimaha dastuuriga ah; kuwaas oo ay ikhtisaaska u leedahay Maxkamadda Dastuurigu.
Qodobka 121aad-Maxkamadaha Gaarka ah
(1) Laguma dhisi karo maxkamad si aan waafaqasaneyn mabaadi’da cadaalada ee ku xusan dastuurka.
(2) Waxaa sharci lagu samayn karaa maxkamad gaar ah oo ay leeyihiin ciidammada qalabka sida taasoo awood u leh qaadista dembiyada ay galaan xubnaha ka tirsaan ciidamada qalabka sida oo keliya xilliyada nabada iyo dagaalkaba.
Qodobka 122aad-Maxkamadda Racfaanka iyo Maxkamadaha Derejada koowaad
Xilalka iyo qaab dhismeedka Maxkamadda Racfaanka iyo Maxkamadaha Darajada Koowaad waxaa qeexi doona Xeerka Nidaamka Garsoorka.
Qodobka 123aad-Xal-dhaqameedka Khilaafaadka
Maxakamaduhu waxay aqoonsanayaan go’aanada xeer dhaqameedka ku xalliyo khilaafaadka, waxaana hadafka aqoonsigaasi xaddidi doona Sharci gaar ah.
Qodobka 124aad-Magacaabista Garsoorayaasha
(1) Qofka Garsoore loo magacaabayo waa inuu yahay qof hufan lehn aqoon iyo khibrad munaasab u ah jagada garsoore ee loo magcaabayo;
(2) Golaha Adeegga Garsoorka ayaa u soo jeedinaya Aqalka Wakiilada dowlad goboleedyada magacyada garsoorayaasha Maxkamadda Dastuuriga iyo Maxkamadda Sare. Madaxweynaha ayaa xeer ku magacaabaya qofka ay garsooranimada u ansaxiyeen Golaha Wakiiladu.
(3) Garsoorayaasha aan ka mid ahayn Maxkamadda Dastuuriga iyo Maxkamadda Sare waxaa soo jeedinaya magacaabistooda Golaha Adeegga Garsoorka, waxaana lagu magacaabaya wareegto Madaxweyne.
Qodobka 125aad-Muddo Xileedka Garsoorayaasha
(1) Da’da hawlgabka uu garsooruhu ku gelayo waa 70.
(2) Garsoore lagama qaadi karo xilka, haddii aan loo cuskan oo aan lagu helin anshax xumo, dhaqan xumo, awooddarri jireed iyo/ama mid maskaxeed oo joogto ah oo lagu caddeeyay baaritaan. Xeerka nidaamka Garsoorka ayaa qeexi doona habraacyada la xiriira xil ka qaadista garsooraha.
(3) Cabashada laga keeno garsoore ee ku saabsan anshax xumo waxaa loo gudbin karaa Golaha Adeegga Garsoorka oo qaadaya tallaabooyinka ku habboon markay ku qancaan inay jiraan sababo macquula oo keenaya in la baaro garsooraha. Tallaabooyinka habboon in la qaado waxaa ka mid ah in loo gudbiyo kiiska garsooraha kormeeraha garsoorka, hadii kiisku culus yahayna, waxaa la magacaabaya guddi madax bannaan.
(4) Golaha Adeegga Garsoorku wuxuu magacaabayaa guddi madax bannaan oo ka kooban saddex garsoore oo xilhaya ama hawlgab ah oo baara anshax xumida lagu soo eedeeyay Garsooraha. Garsooraha waxaa laga qaadayaa xilka haduu guddigu caddeeyo in ay jirto dhaqan xumada culus ee lagu soo eedeeyay garsooraha.
(5) Hadii Golaha Adeegga Garsoorku uu ku qanco inay jiraan asbaab macquul ah oo lagu aamino inuusan garsooruhu gudankarin xilkiisa sababo la xiriira awood-yari jireed iyo mid maskaxeed, waxay magacaabayaan guddi baara caafimaadka garsooraha. Guddigu waa inuu ka kobnaadaa xeeldheerayaal caafimaad iyo ugu yaraan hal garsoore hore. Haddii ay guddiga u caddaato inuusan garsooruhu sii wadi karin xilkiisa, Golaha Adeegga Garsoorku wuxuu garsooraha galinayaa howlgab caafimadkiisa awgii.
(6) Dhisida Xafiiska Kormeerka Garsoorka waxa lagu soo saari doonaa xeerka nidaamka garsoorka.
Qodbka 126aad-Golaha Adeegga Garsoorka ee Madaxabannaan
(1) Waa inuu jiraa Gole Adeeg Garsoor oo Madaxbannaan xilkiisuna yahay hoggaaminta siyaasadda guud iyo maamul ee garsooka, sida magacaabidda, xil ka qaadista, anshax-marinta, kala badalidda, mushaarka iyo gunnada hawlgabka garsoorayaasha sida ku xusan sharciga. Shuruudaha hawlaha garsoorka waxaa dejinaya Golaha Adeegga Garsoorka.
(2) Golaha Adeegga Garsoorka waa ka madaxbannaan yahay awooddaha sharcidejinta iyo fulintaba.
(3) Golaha Adeegga Garsoorku wuu u madax bannaan yahay miisaaniyaddiisa, waxayna u
gudbinayaan miisaaniyaddooda Wasaaradda Maaliyadda iyaga ayaana maamulanaya jiyagoo raacaya sharciyada maaliyadda.
Qodobka 127aad-Xubnaha Golaha Adeega Garsoorka
(2) Gudoomiyaha waxaa iska dhex dooranaya xubnaha Guddiga Adeega Garsoorka. Gudoomiyuhu wuxuu xilka haynayaa mudo shan sano ah waxaana loo cusbooneysiin karaa hal muddo xileed kale. Gudoomiyaha gudiga wuxuu iska wareejinayaa dhammaan waajibaadka ka baxsan howlaha Guddiga islamarka loo dhaariyo xilkaas. Qofka loo doorto gudoomiyaha wuxuu haynayaa mudo xileed dhameystiran xataa haddii muddada xilka qofka la magacaabayo ay ka yartahay shan sano.
Qodobka 128aad-Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud
CUTUBKA 11AAD GUDDIYADA QARANKA, XAFIISYADA IYO HAY’ADAHA MADAXABANNAAN
Qodobka 129aad-Mabaadi’da Guud
(1) Guddiga Madaxa Bannaan waa hay’ad ka madax banaan xukuumadda ama kormeerkeeda siyaasaded, kartina u leh in ay uga faa’ideeyaan dadweynaha hawlaha gaarka ah ee ay u xilsaaran yihiin.
(2) Guddiga madaxa bannaan marka ay ku jiraan gudashada waajibkooda waa in ay ka muuqataa in ay ku shaqaynayaan dareenka xuquuqda adanaha, dimuqoraaddiyad iyo wax-qarsi la’aan.
(3) Guddiga madaxa bannaani waa inaysan hoos imaan, kana amar-qaadan cid ama hay’ad kale.
(4) Maaliyadda Guddiga madaxa banaan la siinayaa waxay ahaanaysaa madax gaar ah oo ka tirsan miisaaniyadda qaranka.
Qodobka 130aad-Xubnaha Guddiyada Madaxabannaan
(1) Haddii uusan Dastuurku si kale u dhigin, tirada Guddiga Madaxa bannaani waa in aysan ka yaraan saddex, aysan ka badanna sagaal xubnood; kuwaas oo si joogto ah u shaqaynaya.
(2) Ugu yaraan hal xubin oo ka mid ah xubnaha Guddigu waa in ay noqtaa haween, haddii guddigu uu ka kooban yahay saddex ama afar xubnood. Sidoo kale, haddii Guddiga uu ka kooban yahay shan xubnood iyo wax ka badan, labo ka mid ahi waa in ay noqdaan haween.
Qodobka 131aad-Magacaabidda Guddiyada
Haddii uusan Dastuurku si kale u dhigin, Wasiirka ay khuseyso ayaa u soo jeedinaya Golaha Wasiirrada magacyada Guddiga. Haddii Golaha Wasiiradu ay ansixiyaan, magacyada waxaa loo gudbinayaa Golaha Shacbiga. Haddii Golaha Shacbigu uu ansixiyo magacyadaas, waxaa loo gudbinayaa Madaxweynaha, si uu magacaabistooda xeer uga soo saaro.
Qodobka 132aad-Shuruudaha Xubnaha Guddiyada Madaxabannaan
Qofka loo magacaabayo Guddi madax bannaan waa in uu buuxiyaa shurudaha soo socda:
(a) Inuu leeyahay aqoon asaasi ah;
(b) Inuu leeyahay akhlaaq iyo sumcad wanaagsan;
(c) In uu muujiyo hawlkarnimo sare ee hawlaha Dawladda Soomaaliya;
(d) In laga helo shuruudaha kale ee lagu tilmaamay Dastuurka ama sharciga Guddiga lagu dhisay.
Qodobka 133aad-Muddada Xilka
(1) Muddada xilka xubnaha Guddigu waa 5 sano, oo loo cusboonay siin karo hal mar oo keliya.
(2) Xubin Guddi oo iscasileysaa waa in ay iscasilaaddeeda qoraal ahaan Madaxweynaha ugu gudbisaa.
(1) Xubin Guddi waxaa looga qaadi karaa xilkiisa si waafaqsan qodobkan oo keliya.
(2) Xubin Guddi waxaa xilka looga qaadi karaa marka ay ku timaaddo awood-darro oogo iyo/ama maskaxeed, bixinta sirta xafiiska ama dhaqanxumo kale oo culus, ka- maqanaansho saddex kalfadhi oo isku xiga ama lagu helo dembi culus.
(3) Guddomiyaha Maxkamada Dastuurigu wuxuu magacaabayaa maxkamad gaar ah oo baarta eedaha dhanka ka ah xubinta Guddiga, hadduu ku qanco in ay jiraan sababo macquul ah. Haddii ay jirto xaalad la rumaysan karo in xubinta Gudigu aanay gudan karin xilkeeda, jir ama maskax ahaan, maxkamadda gaarka ah waa in uu ka mid noqdo, ugu yaraan, xeeldheere caafimaad oo leh khibrad la xiriirta arrintaas.
(4) Haddii maxkamadda gaarka ahi ay uga warbixiso Guddoomiyaha Maxkamadda Dastuuriga ah in xubinta Guddi ay xilkeeda gabtay ama lagu helay dembi culus oo keeni kara in xilka laga qaado, Guddomiyaha Maxkamadda Dastuurigu wuxuu talo ka siinayaa Madaxweynaha in xilka laga qaabo xubinta Guddiga, Madaxweynuhuna waa in uu ka qaadaa xilka.
Qodobka 135aad-Waajibaadka Warbixn
Guddi kasta oo madax bannaani wuxuu warbixin sanadeed u soo bandhigayaa baarlamaanka. Warbixinta guddiyadaasi waa in ay noqotaa mid ay heli karaan dadweynuhu, garanna karaan.
Qodobka 136aad-Ku-dhaqanka Cutubkan
(1) Cutubkan waxaa lagu dhaqayaa gudddiyada madaxa bannaan ee hoosta ku xusan iyo kuwa loo baahan yahay in lagu dhiso si dastuuri ah ilaa iyo inta uusan ka hor’imaaneyn qodobada Dastuurka :
(a) Guddiga Doorashada;
(b) Guddiga Xuquuqda Aadanaha;
(c) Guddiga shaqaalaha Rayidka ah ee dawladda;
(d) Golaha Adeegga Garsoorka.
(2) Sharci ayaa lagu dhisayaa guddiyada soo socda, waxaana lagu dhaqayaa qodobbada cutubkaan:
(a) Guddiga Xuduudaha iyo Tirokoobka;
(b) Guddiga Xallinta Khilaafaadka dhulka iyo hantida.
(3) Sharci ayaa lagu dhisi doonaa guddi kale oo madax bannaan; iyadoo la raacayo shuruudaha cutubkan, waxaana lagu dhaqayaa qodobbada cutubkan.
Qodobka 137aad-Xafiisyada Madaxabannaan
(1) Cutubkan waxaa laguu dhaqayaa xafiisyada madaxa bannaan ee hoosta ku xusan ama kuwa loo baahan yahay in lagu dhiso si dastuuri ah ilaa iyo inta aysan ka hor’imaaneyn qodobbada dastuurka:
(a) Garyaqaanka Guud ee dawladda;
(b) Hantidhoorka Guud.
(2) Cutubkan waxaa lagu dhaqayaa xafiis kasta oo kale oo lagu dhisay sharci, laguna dhawaaqay in uu madax bannaan yahay.
CUTUBKA 12AAD-HEERARKA KALA DUWAN EE SHAQAALAHA DAWLADDA EE RAYIDKA
Qodobka 138aad-Qiyamka Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah
Shaqada rayidka ee heeraraka kala duwan ee xukuumadda waa in lagu saleeyaa qiyamka dastuurka,
hufnaan, wax-qarsi la’aan, u-adeegis bulsho iyo dhawrista jaranjarada maamul, anshax-wanaag, karti,
howlkarnimo, mihnad sare, caddaalad, sinnaan iyo dhaqan-wanaag.
Qodobka 139aad-Ilaalinta Xuquuqda Shaqaalaha Dawladda ee Rayidka ah
Shaqaalaha rayidka ah laguma dhibaatayn karo gudashada hawlahooda. Shaqaalaha rayidka ah lama eryi
karo, xilka lagama qaadi karo ama derejo-rid laguma samayn karo haddii aysan jirin sabab macquul ah;
iyadoo loo maray habraac caddaalad ah oo uu sharcigu tilmaamayo.
CUTUBKA 13 AAD-HAY’ADAHA DAWLAD-GOBOLEEDYADA
Qodobka 140aad-Hay’adaha Dawlad-Goboleedyada
Dhismaha hay’adaha sharci dejinta iyo fulinta ee xukuumadaha dawlad-goboleedyadu waa mawduuc Dastuurrada maamul-goboleedyada lagu oggolaaday si waafaqsan cutubkan.
Qodobka 141aad-Mabaadi’da Dastuurrada Dawlad-goboleedyada
(1) Dastuurrada dawlad-goboleedyadu waa in ay waafaqaan Dastuurkan oo ay ka mid yihiin mabaadi’da asaasiga.
(2) Dastuurrada dawlad-goboleedyadu waa in ay raacaan mabaadi’da guud iyo qaabdhismeedka Dastuurka federaalka.
(3) Dastuurrada dawlad-goboleedyada waa in ay xaqiijiyaan ilaalinta dadka lag tira badanyahay.
Qodobka 142aad-Samaynta Dastuurrada Dawlad-goboleedyada
(1) Dawlad-goboleedyadu waa in ay kala tashadaan Dalwadda federaalka ah qorshaynta qaabka iyo habraaca samaynta dastuurradooda.
(2) Dawlad-goboleedyadu waa in ay u sameeyaan dastuurradooda si dimoqoraaddi ah oo ay dadweynuhuna si buuxda uga qayb-galayaan.
(3) Dastuuraka dawlad-goboleedda marka la ansixiyo kaddib waa in loo celiyaa maxakamadda Dastuuriga si ay dib-u-eegis ugu samayso in uu waafaqasan yahay dastuurka federalka, ayna ka mid yihiin mabaadi’da ku xusan qodobka sare. Haddii maxkamadda Dastuuriga ahi ay ogaato in uusan waafaqsanayn dastuurka, iyadoo sababaynaysa waa in ay ka bixisaa tilmaan sida loo waafajin karo, Dastuurka dawlad- goboleeddu ansax noqon maayo ilaa inta Maxakamadda Dastuuriga ahi ay ka caddaynayso in uu yahay mid waafaqsan Dastuurka Federaalka.
Qodobka 143aad-Wax-ka-bedelidda Dastuurrada Dawlad-goboleedyada
Wax-ka-beddalidda Dastuurrada Dawlad-goboleedyada waa in lagu sameeyaa si dimoqoraaddi ah, iyadoo la siinayo dadweynaha dawlad-goboleedda fursad ku filan oo ay kaga qayb-galaan geeddisocodka wax-ka-beddalka dastuurka. Haddii ay dawlad-goboleed dooneyso in ay wax ka bedasaho dastuurkeeda, waxay wargelinaysaa Dawladda Federaalka waxayna u gudbinaysaa Maxkamada Dastuuriga qodobada la bedelay si ay u eegto. Wax-ka-beddel kasta sharci ma noqonayo mana hirgalayo ilaa Maxkamadda Dastuuriga ahi ay caddayso in uu waafaqasan yahay Dastuurka Federaalka.
CUTUBKA 14 AAD-MAALIYADDA GUUD
Qodobka 144aad-Mabaadi’da Maaliyadda Guud
Mabaadi’da asaasiga ah ee maamulka maaliyadda guud waxaa ka mid ah furfurnaan iyo laxisaabtan, in loogu isticmaalo dakhliga si caddaalad ku tilmaaman oo ay ku jirto horumarinta dalka iyo danta midnimada qaranka, lagana ilaaliyo dayaca.
Qodobka 145aad-Awoodaha Dakhli-uruurinta
(1) Dawladda federaalku waxaay ka uruurin kartaa dakhli ilaha loogu qoondeeyey Jadwalka 2aad.
(2) Xukuumadaha dawlad-goboleedyadu waxay dakhli ka uruurin karaan ilaha loogu qoondeeyey Jadwalka 2aad.
(3) Xukuumada federaalku sharci ayay ugu oggolaanaysaa xukuumadaha dawlad- goboleedyada iyo
dawladaha hoose in ay uruuriyaan canshuuro ama dakhli kale sida uu qabo sharcigaan, laakiin waa in Dawladda Federaalku u celisaa dawlad-goboleedyada kharajka uga baxay ururinta dakhligaas.
(4) Dakhliga dawladda federaalka ay u soo xareeyaan xukuumadaha dawlad-goboleedyada ama dowladda hoose waa in ay u qaybisaa dawlad- goboleeddaa ama dawladda hoose, dhammaan ama qaybo ka mid ah intii suurtogal ah, si ay dhiiriggelin ugu noqoto dawladaasi in ay u soo xareyso dakhliga si waxtar leh.
(5) Dawladda dhexe iyo xukuumadaha dawlad-goboleedyadu waa in ay si sharci ah ugu oggolaadaan dawladaha hoose in ay soo uruuriyaan, una kaydsadaan isticmaalkooda canshuuraha ku haboon sida khidmada shatiyada suuqyada, canshuurta dhismaha, IWM.
Lama uruurin karo canshuur aysan oggolaan barlamaanka federaalku ama dawlad- goboleedda ay khuuseyso. Sharciga canshuuraha waa in si siman loogu dhaqo dadka oo dhan, lagamana cafinayo saraakiisha dawladda ama cid kale. Waa in sharci lagu oggolaado canshuur-dhaafka, laguna war-geliyaa Hantidhawrka Guud.
Qodobka 147aad-Noocyada Qaybinta Dakhliga Dawladda Federaalku Siiso Dawladaha Kale
(1) Xukuumada federaalku dakhliga ay ka uruurisay ilaha qaranka waxay noqonayaan mid ay ku fuliso masuuliyadaheeda ama waxay u qaybinaysaa dawlad-goboleedyada ama dawladaha hoose ama waxay ka dhiganaysaa kayd qaran.
(2) Xukuumadda federaalku waxay dakhliga ugu qaybineysaa dawlad-goboleedyada sida:
(a) dakhli dawladahaas loogu qoondeeyey dastuurka ama sharci;
(b) talada ay kusoo jeediyeen guddiga maaliyadda qaranka, ama
(c) Deeqaha xukuumadda federaalka oo ay ka mid yihiin deeqaha sinaanshaha oo loogu talo-galay in kor loogu qado awoodda dawlad-goboleedyada aan lahayn awood dakhli- uruurin marka loo fiiriyo hawlaha adeeg ee ay u fulinayaan muwaaddiniintooda, si loo soo gaarsiiyo heerka adeegyada dawladaha kale.
(d) Dawladda Federaalka iyada oo maraysa dawlad- goboleedyada waxay dakhliga u qaybin kartaa dawladaha hoose si ay u gutaan hawlahooda, dawlad-goboleedyaduse iyaga ay si toos ugu qaybin kara dakhliga dawladaha hoose
Qodobka148aad-Mabaadi’da Hagaysa Qaybinta Lacagaha
Waa in la soo saaro sharci si caddalad ah loogu qaybinayo heerarka kala duwan ee xukuumadda dakhliga lagu soo uruuriyay magaca qaranka, iyadoo la tixgelinayo arimaha soo socda:
(a) danta guud ee qaranka;
(b) waajibaadka qaranka;
(c) Masuuliyadaha heerarka kala duwan ee Dawladeed loogu xilsaaray Dastuurkan, dastuurrada dawlad-goboleedyada, shuruucda iyo barnaamijyada Dawladda federaalka iyo dawlad-goboleedyada;
(d) haqabtirka baahida asaasiga ah ee dadweynaha;
(e) baahida qorshaynta horumarka muddada dheer ee dalka;
(f) sinnaan la’aanta dawlad-goboleed marka loo fiiriyo awoodooda dakhli-uruurineed;
(g) baahida dawladaha in ay yeeshaan saadaal heer dakhli, si ay u qorshaystaan
(h) Baahida in lagu dhiiriggeliyo xukuumadaha in ay si waxtar leh u soo uruuriyaan dakhliga;
(i) baahida loo qabo in laga jawaabo xaaladaha degdegga ah iyo waxyaabaha aan la sii saadaalin.
Dawlad-goboleedyadu waxay amaahan karaan lacag marka ay ballanqaad ka haystaan Xukuumada Federaalka.
Dhammaan dakhliga ay soo ururiso Dawladda federaalka ama dawlad-goboleedyada waa in lagu shubaa sanduuq lagu dhisay sharci islamarkaana ay maamulaan hay’adaha dowladda ee u xilsaaran, looguna isticmaalo ujeedooyinka lagu ogolaaday sharciga.
Qodobka 151aad-Qaybinta iyo Qoondaynta Dakhliga
U-qaybinta dakhliga federaalka dawlad-goboleedyada ee lagu xusay qodobka 147 waa in lagu saleeyaa Sharciga Qaybinta Sanadlaha ee Dakhliga Federaalka oo uu ansixiyey baarlamaanka federaalku.
Qodobka152aad-Miisaniyadda Sanadlaha ee Federaalka
Miisaaniyadda Sanadlaha ee Xukuumadda Federaalka waa in la hor-geeyaa Baarlamaanka Federaalka ugu yaraan ka hor laba bilood intuusan dhammaan sannad- maaliyadeedkii hore, waana in lagu ansixiyaa sharci uu soo saaray Baarlamaanka Federaalku.
Qodobka153aad-Kharaj Gelidda Ka Hor Ansixinta Barlamaanka ee Miisaaniyad Sanadeedka
Haddii aan la ansixin miisaaniyadda bilawga sanad-maaliyadeedka, waxaa la sii isticmaali karaa lacag, iyada oo lagu salaynayo miisaaniyadda sanadkii tegey. Lama bixin karo in ka badan rubuc miisaaniyaddii sanadkii tegey ama in aan ka badnayn 4 bilood oo ka mid ah sanad- maaliyadeedka cusub.
Qodobka 154aad-Kharajyada Lama-filaanka ah
Haddii ay lagama-maarmaan noqoto in la daboolo baahi kharaj aan la fileyn ee miisaaniyadda federaalka, xukuumadda federaalka ahi waxay bixin kartaa lacag, xataa haddii uusan jirin qodob ku cad miisaaniyadda la oggolaaday. Xadka ugu sarreeya ee habkaan lagu kharaj-garayn karaa wuxuu u dhigmaa 10% miisaaniyadda la oggolaaday. Waana in lagu weydiistaa baarlamaanka oggolaansho muddo bil gudaheed ah, isla markaana muddo saddex bilood gudahood kharajkaas lagu ogolaadaa sharci.
Qodobka 155aad-Xisaabaadka iyo Hanti-dhawrka Hay’adaha Dawladda
Dhammaan xisaabaadka hay’adaha dawladda heer kastoo ay yihiinba waa in ay baarta hay’adda madaxa bannaan ee Hantidhawrka Guud.
Qodobka 156aad-Heshiisyada Badeecadaha iyo Adeegyada
Qandaraasyada Dawladda ee badeecadaha iyo adeeggu waa in ay ahaadaan kuwa dadka u furan daahna furan.
Qodobka 157aad-Guddiga Maaliyadda
(1) Waa in sharci lagu dhisaa guddi maaliyadeed oo ka kooban dad laga soo magacaabay heerqaran iyo heer dawlad-goboleed. Tirada uu ka kooban yahay guddiga maaliyadda waa in lagu oggolaado xeerka Golaha Wakiillada oo ay ansixiyeen ugu yaraan kalabbar oo bar ergada Goluhu.
(2) Guddiga maaliyadda waa in uu leeyahay karti iyo dhaqale uu ku samayn karo cilmibaaris iyo qiimayn codsiyada ay soo gudbiyaan xukuumadaha dawlad-goboleedayada.
(a) Qaybta laga siinayo dawlad-goboleedyada canshuuraha laga soo uruuriyey heerka qaran, iyo
(b) Sida dawlad-goboleedyadu u wadaagayaan qoondada.
(4) Guddiga maaliyaddu waa inuu markasta dib-u-eegis kusameeyo nidaamka dakhli-qaybinta, isla markaasna uu u soo jeediyo Dawladda federaalka talooyin lagu qaybinayo dakhliga muddo shan sano ah markiiba. Sidoo kale, wuxuu qabanayaa hawlaha uu u xilsaaro sharcigu.
(5) Guddiga maaliyadda qaranku waa inuu tixgeliyaa mabaadi’da ku xusan qodobka129.
Qodobka 158aad-Guddiga Hanti-Dhawrka Madaxa Bannaan ee Federaalka /Hanti-dhowraha Guud
(1) Hanti-dhawrka Guud waxaa lagu magacaabayaa habraac sharci dejiyey kaa soo xaqiijinaaya madax bannaanida xafiiska.
(2) Hantidhawraha guud waa in uu yahay qof aqoon iyo waayo’aragnimo u leh hawsha baaritaanka xisaabaadka.
(3) Hanti-dhawraha guud waxaa xilka looga qaadi karaa si caddaalad ah, iyadoo la raacayo hannaan baaritaan oo cadaalad ah.
(4) Waajibaadka waajibaadka hanta-dhawrka madaxabannaan ee federaalka/Hanti-dhawraha guud waa in uu ku sameeyo baaritaan sanadeed dhammaan xisaabaadka hay’adaha Dawladda heer kasta oo ay yihiin.
(5) Hanti dhawraha guud waa inuu baarlamaanka warbixin ugudbiyaa sanadkiiba mar.
Qodobka 159aad-Bangiga Dhexe
Waa in sharci federaal ah lagu dhisaa Bankiga Dhexe ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya. Hawshiisu waxay ahaanaysaa hawlaha caadiga ah ee ay qabtaan Bankiyada Dhexe.
Qodobka 160aad-Khayraadka Dalka
Mabaadi’da ilaalinta khayraadka iyo qaybinta dakhliga ka soo xerooda ilaha khayraadkaas, kuwa dabiicigaa iyo kuwa kalaba waa:
(a) In dadka degaanka la siiyo dhiiriggelin ay ku ilaaliyaan, kuna maamulaan kheyraadka dabiiciga ah si masuuliyadi ku jirto.
(b) In xukuumadaha heer kastaa ay haystaan dhiiriggelin iyo dhaqaale lagu horumariyo, laguna fuliyo siyaasadaha maamulka kheyraadka aan la cusbooneysiin karin, iyo in sida ugu habboon looga fa’iideysto kheyraadkaas.
(c) Bulshada qaybaheeda ka faa’ideysata kheyraadka dabiicga ah waa in loo xilsaaraa xannaanaynta, maaraynta iyo ka-faa’ideysiga kheyraadkaas.
Qodobka 161aad- SharcidDejinta Federaalka ee Arrimaha Maaliyadeed
Waa in sharci federaal ah lagu soo saaraa heykal maamul-maaliyadeed oo masuuliyadihiisa ay ka mid yihiin:
(a) Habka loo soo bandhigo miisaaniyadda dawlad-goboleedda iyo jadwalka habraaca miisaaniyad-samaynta dawlad-goboleedyada;
(b) In ay damaanad-qaad siiso Dawlada Federaalka deymaha ay soo weyddiistaan dawlad- goboleedyada;
(d) Baarista xisaabaadka hay’adaha aan dawliga ahayn ee dawladda dhaqaale ka hela;
(e) Tallaabooyinka guud ee lagma-maarmaanka u ah dhaqangelinta cutubkaan.
CUTUBKA 15AAD-SUGIDDA NABADDA IYO AMMAANKA QARANKA
Qodobka162aad-Hawlaha Ammaanka ee Jamhuuriyadda
(1) Xukuumadda Federaalku waxay damaanad-qaadaysaa nabadda, gobannimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyada iyo bedbaadinta shacbigeeda, iyadoo loo marayo adeegyada ciidammada amniga oo ay ku jiraan ciidammada qalabka sida, nabasugidda iyo ciidanka booliska ee federaalka.
(2) Ciidammada qalabka sida ee Jamhuuriyadda waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta gobannimada iyo madaxbannaanida Qaranka iyo difaaca midnimada dhuleed.
(3) Booliska Federaalka xilkiisu waa ilaalinta nolosha muwaaddiniinta iyo dadka kale ee deggan Jamhuuriyada. Wuxuu kalo oo uu ilaalinayaa ammaanka iyo nabadgelinta hantida
muwaddiniinta iyo degganeyaasha.
(4) Ciidanka booliska ee lagu abuuray sharciyada dawlad-goboleedyada xilkiisu waa ilaalinta nolosha iyo hantida muwaaddiniinta iyo dhawrista xasilloonida iyo ammaanka degaannadooda iygoo kaligood ah ama kaashanaya ciidammada booliska ee federaalka.
Qodobka 163aad-Kormeerka Ciidammada Qalabka Sida
(1) Ammaanka qaranka waxaa mabda’ asaasi u ah in dad rayid ah ay kormeeraan hawlaha
ciidammada qalabka Sida.
(2) Ciidamada qalabka Sida ee qaranka ayaa ah ciidanka keliya ee sida sharciga ah uga jira
Jamhuuriyada dhexdeeda, waxaana reeban maleeshiyaad hubaysan oo gaar loo leeyahay.
Qodobka 164aad-Mabaadi’da Ciidammada Qalabka Sida
(1) Waa in ay Ciidammada Qalabka Sidaa dhawraan mabaadi’da soo socota:
(d) Furfurnaan iyo oggolaansho laxisaabtan, iyo
(e) Dhexdhexaadnimo xag siyaasadeed.
(2) Qof kasta oo Soomali ah waxa uu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato jagooyinka Ciidammada Qalabka Sida, iyada oo aan la takooreyn.
Qodobka 165aad-Ku-tagrifalidda Awoodeed
Gaboodfallada xuquuqda aadanaha ee la tuhunsan yahay xubno ka tirsan Ciidammada Qalabka Sidaa inay dad rayid ah ka galeen waa in dacwadooda lagu qalaa Maxkamadaha rayidka ah.
Qodobka166aad-Amarro Sharcidarro ah oo Cad
Xubnaha ka tirsan Ciidammada Qalabka Sidaa uma hogaansami karaan amar sharcidarro cad ah.
Qodobka 167aad-Kormeerka Rayidka ee Ciidammada Qalabka Sida iyo Nabadsugidda
(1) Madaxweynuhu [marka lagu dhaqamayo nidaamka baarlamaaniga ah) isaga oo fulinaya codsiga Ra’iisul-wasaaraha wuxuu magacaabayaa madaxda Ciidammada Qalabka Sida iyo Nabadsugidda.
(2) Madaxweynaha ayaa oggolaanaya dagaal hubaysan oo lagu difaacayo Jamhuuriyadda, iyadoo la fulinayo waajibaad dawladnimo, waxaana ansixinayo Golaha Shacabka.
(3) Waa in uu jiraa Wasiir ka tirsan Golaha Wasiirrada oo masuul ka ah arrimaha difaaca.
(4) Hawlaha Ciidammada Qalabka Sida waxaa lagu samaynayaa kormeer rayid ah oo ay ku jiraan guddi gaar ah oo baarlamaan.
(1) Ciidammada booliska ee jamhuuriyaddu waxay ka kooban yihiin ciidammada booliska madaniga ee federaalka iyo ciidan kastoo boolis ah oo ay dhistaan dawlad- goboleedyadu.
(2) Ciidammada booliska madaniga ee federaalku waxay ka hawl-gelayaan dalka oo dhan; ayagoo iskaashi dhow la samaynaya hay’adaha dawlad-goboleedyada.
(3) Dhammaan ciidammada boolisku waa in ay xushmeeyaan Dastuurka, sharciyada dalka iyo habdhaqankooda kaas oo uu sharci gaar ahi xakamaynayo.
Qodobka 169aad-Xaaladda Degdegga Ah
(1) Xaaladda degdegga ah waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka ay lagama-maarmaan noqoto in la xaliyo xaalad halis ah oo ka dhalatay dagaal, weerar, gedood, rabshado, masiibo Rabaani ah ama xaalad guud oo culus.
(2) Xaalad degdeg ah waxaa lagu dhawaaqi karaa marka ay dhibaato saamayso dhammaan ama qayb ka mid ah dalka, waase in aysan ka badan inta loo baahan yahay in lagu xalliyo xaaladdaas.
(3) Madaxweynuhu [Barlamaaniga, isagoo fulinaaya codsiga Golaha Wasiirada] wuxuu awood u leeyahay inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah, waxaana lagama-maarmaan ah in Golaha Shacbigu uu ka doodo, kuna oggolaado 21 maalmood gudahood laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqay. Marka Golaha Shacbigu arrinta ka doodayo waa inay ahaato mid dhegeysiga dadweynaha u furan, haddi aanay jirin wax ka reebaya.
(4) Golaha Shacbigu wuxuu oggolaan karaa ama kordhin karaa xaaladda degdegga ah muddo aan ka badnayn saddex bilood markiiba. Haddii baarlamaanku oggolaan waayo kordhinta xaaladda degdegga ah waxaa istaagaya sii-socoshada xaaladda degdegga ah.
(5) Ku-dhawaaqidda xaaladda degdegga ahi waxay siinaysaa hay’adda fulinta awoodo gaar ah oo lagma-maarmaan u ah xakamaynta xaaladaha.
(6) Awoodaha lagu oggolaaday xaaladaha degdega ah waa in aysan ka mid ahayn in lagu xadgudbo xuquuqaha lagu sheegay Dastuurkan, haddii xadgudubkaasi uuna u ahayn lagama- maarmaan ujeeddooyinka xakamaynta iyo xal-u-helidda xaaladda degdegga ah.
(7) Ansaxnimada ku-dhawaaqidda xaaladda degdegga ah iyo habraacyada ku lugta leh waxaa looga hortegi karaa Maxkamadda.
Qodobka 170aad-Sharcidejinta Arrimaha Nabadda iyo Amniga
(1) Waa in la soo saaraa sharci federaal ah si loo xaqiijiyo hirgelinta cutubkan iyo dhawrista mabaadi’da Dastuurka, waana in si gaar ah:
(a) Loogu muujiyaa siyaasadda qaranka ee ka-hortagga argaggaxisannimada, burcadbadeedda iyo tahriibinta sharcidarrada ah iyo dembiyada abaabulan, iyadoo loo dhisayo hay’ad gaar ah oo wax ka qabata khataraha gaarka ah;
(c) loo nidaamiyaa xiriirrada u dhexeeya booliska madaniga ee federaalka iyo ciidammada
booliska dawlad-goboleedyada, si loo xaqiijiyo iskaashi iyo wadashaqayn;
(e) loo dhisaa, lana nidaamiyaa hawlaha guddiga baarlamanka ee u xilsaaran arrimaha
Ciidammada Qalabka Sida;
(g) Waa in ay jirto hay’ad ay dadweynuhu u geysan karaan cabashooyinkooda ku saabsan
xadgudubyada xubno ka tirsan ciidammada ammaanku ay u geystaan;
(g) In la mamnuuco maleeshiyooyinka sida gaarka ah loo leeyahay, iyo
(h) In la nidaamiyo shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay iyo gaar ahaan arrimaha la
xiriira shuruudaha shirkadaha amniga gaarka ah ay hub u isticmaali karaan.
(2) Sharci dawlad-goboleed waa in uu xaqiijiyaa nidaaminta booliska dawlad-goboleedyada heer u dhigma midka loo isticmaalay nidaaminta booliska madaniga ah ee federaalka , iyo in ay xaqiijiyaan inay nidaamintaasu waafaqasan tahay mabaadi’da ku xusan cutubkan oo kormeerka rayidku uu ku jiro.
(3) Sharci federaal ayaa go’aaminaya xaaladaha degdegga ah iyo awoodaha gaarka ah ee loo baahan karo.
(4) Sharci federaala ayaa go’aaminaaya xaaladaha maangalka ah ee lagu hayn karo qofka la soo xiro mudada xaaladda degdegga, sida loola dhaqmayo iyo magdhawga laga siinayo haddi dulmi lagula kaco.
(5) Sharciga federaalku cudurdaar uma samayn karo, iyadoo marmarsiiyo laga xaalad degdeg ah, cid lagu helay xadgudub xuquuq kaas oo aan la aqabali karin ama ku xadgudub masuuliyadda madaniga ama ciqaabta.